ဝိတ်ထိန်းနေတဲ့ ယောင်းတို့ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အဆာပြေစားစရာ (၅) မျိုး - For her Myanmar
ဝိတ်ချနေလို့ မုန့်မစားရဘူး ဘယ်သူပြောလဲ ?
ယောင်းတို့ရေ… ဝိတ်ချကြတဲ့အခါ ရှောင်ရတဲ့ အစားအစာတွေ အများကြီးပါပဲ။ ဆီကြော်တွေ၊ အချိုတွေ၊ အအီအစိမ့်တွေစတဲ့ ကိုယ်ကြိုက်ပေ့ဆိုတာတွေကို စွန့်လွှတ်ရတဲ့အပြင် ထမင်းကိုလည်း ပမာဏနည်းနည်းပဲ စားလို့ရတာကြောင့် အာသာမပြေတာများပါတယ်။ (သိနေတယ်လေ … ကိုယ်တိုင်ကြုံဖူးတာကိုး) ဒီတော့ ဘဝတူယောင်းတွေအတွက် ဝိတ်မတက်စေဘဲ အဆာပြေအနေနဲ့ စားလို့ရနိုင်မယ့် စားစရာတွေအကြောင်းကို ဝေမျှပေးသွားမယ်နော်..
(၁) Chia seed pudding
Chia ဆိုတဲ့ အစေ့လေးတွေက မြန်မာလိုတော့ ဘယ်လိုခေါ်လဲ မပြောတတ်ဘူး။ Chia စေ့လေးတွေမှာက အမျှင်ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါတဲ့အပြင် နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတဲ့ antioxidants ဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။ Chia ပူတင်းမှာပါတဲ့ ကယ်လိုရီကလည်း (၂၀၀) ထက်နည်းတာမို့ စိတ်ချလက်ချစားနိုင်တာပေါ့။
ကြက်ဥမှာ ပရိုတင်းဓာတ် အမြောက်အမြားပါတာကိုတော့ ယောင်းတို့သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ကြက်ဥပြုတ်စားတာက ဗိုက်အပြည့်ဆုံးနဲ့ အဆာအခံဆုံးပါပဲ။ ကြက်ဥပြုတ်နှစ်လုံးမှာ (၁၄၀) ကယ်လိုရီနဲ့ ပရိုတင်း (၁၃) ဂရမ်ပါဝင်ပါတယ်။
Related article >>> ဝိတ်လည်းကျ အာဟာရလည်းဖြစ်စေမယ့် အစားအစာ (၉) မျိုး
ပန်းသီးတွေက ကယ်လိုရီနည်းပြီး အမျှင်ဓာတ်များတဲ့ အဆာပြေစားစရာတွေပါ။ ပန်းသီးမှာပါတဲ့ polyphenol ဆိုတဲ့ဓာတ်က ကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ ကိုလက်စထရော တွေကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ပန်းသီးအလုံးကြီးကြီးတစ်လုံးမှာမှ (၁၁၆) ကယ်လိုရီပဲ ပါတာမို့ စိတ်ချလက်ချစားနိုင်ပါတယ်။
သစ်ကြားစေ့၊ နေကြာစေ့၊ ဗာဒံစေ့စတဲ့ အစေ့အဆန်တွေက အာဟာရပြည့်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အဆာပြေတွေပါ။ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးပြီး တချို့သော ကင်ဆာရောဂါတွေကိုတောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အစေ့အဆန်တွေမှာ ကစီဓာတ်များစွာပါဝင်တာကြောင့် လက်တစ်ဆုပ်လောက်စားရုံနဲ့ ကောင်းကောင်းဗိုက်ပြည့်စေပါတယ်နော်။ ကယ်လိုရီကတော့ တစ်အောင်စမှာ (၁၈၀) ကယ်လိုရီပါပါတယ်။
Related article >>> ဝိတ်ကျချင်လား? ဒီပလန်အတိုင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီအောင် စားကြည့်ပါ။
ဒိန်ချဉ်တကာ့ ဒိန်ချဉ်ထဲမှာမှ ဂရိဒိန်ချဉ်က ကျန်းမာရေးအတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါ။ ကယ်ဆီယမ်နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့အပြင် ဂရိဒိန်ချဉ်မှာ ပရိုတင်းဓာတ်တွေလည်း အများအပြားပါဝင်ပါသေးတယ်။ အဆီမထုတ်ရသေးတဲ့ ဂရိဒိန်ချဉ် (၁၀၀)ဂရမ်မှာမှ (၅၉) ကယ်လိုရီပဲပါတာကြောင့် ဝိတ်ချဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုတာ အမှန်ပါပဲ။
ကဲ … ဒါလေးတွေကတော့ ဝိတ်လည်းချရင်း စိတ်ချလက်ချလည်း စားလို့ရနိုင်တဲ့ အဆာပြေမုန့်လေးတွေပါ။ အစားစားရင်း ဝိတ်လည်းချကြတာပေါ့နော် ….
ဝိတျခနြလေို့ မုနျ့မစားရဘူး ဘယျသူပွောလဲ ?
ယောငျးတို့ရေ… ဝိတျခကြွတဲ့အခါ ရှောငျရတဲ့ အစားအစာတှေ အမြားကွီးပါပဲ။ ဆီကွျောတှေ၊ အခြိုတှေ၊ အအီအစိမျ့တှစေတဲ့ ကိုယျကွိုကျပဆေို့တာတှကေို စှနျ့လှတျရတဲ့အပွငျ ထမငျးကိုလညျး ပမာဏနညျးနညျးပဲ စားလို့ရတာကွောငျ့ အာသာမပွတောမြားပါတယျ။ (သိနတေယျလေ … ကိုယျတိုငျကွုံဖူးတာကိုး) ဒီတော့ ဘဝတူယောငျးတှအေတှကျ ဝိတျမတကျစဘေဲ အဆာပွအေနနေဲ့ စားလို့ရနိုငျမယျ့ စားစရာတှအေကွောငျးကို ဝမြှေပေးသှားမယျနျော..
Chia ဆိုတဲ့ အစလေ့ေးတှကေ မွနျမာလိုတော့ ဘယျလိုချေါလဲ မပွောတတျဘူး။ Chia စလေ့ေးတှမှောက အမြှငျဓာတျကွှယျဝစှာပါတဲ့အပွငျ နှလုံးကနျြးမာရေးကို အထောကျအကူပွုတဲ့ antioxidants ဓာတျတှလေညျး ပါဝငျပါသေးတယျ။ Chia ပူတငျးမှာပါတဲ့ ကယျလိုရီကလညျး (၂၀၀) ထကျနညျးတာမို့ စိတျခလြကျခစြားနိုငျတာပေါ့။
ကွကျဥမှာ ပရိုတငျးဓာတျ အမွောကျအမွားပါတာကိုတော့ ယောငျးတို့သိကွမယျ ထငျပါတယျ။ ကွကျဥပွုတျစားတာက ဗိုကျအပွညျ့ဆုံးနဲ့ အဆာအခံဆုံးပါပဲ။ ကွကျဥပွုတျနှဈလုံးမှာ (၁၄၀) ကယျလိုရီနဲ့ ပရိုတငျး (၁၃) ဂရမျပါဝငျပါတယျ။
Related article >>> ဝိတျလညျးကြ အာဟာရလညျးဖွဈစမေယျ့ အစားအစာ (၉) မြိုး
ပနျးသီးတှကေ ကယျလိုရီနညျးပွီး အမြှငျဓာတျမြားတဲ့ အဆာပွစေားစရာတှပေါ။ ပနျးသီးမှာပါတဲ့ polyphenol ဆိုတဲ့ဓာတျက ကိုယျတှငျးမှာရှိတဲ့ ကိုလကျစထရော တှကေိုလညျး လြှော့ခပြေးနိုငျပါသေးတယျ။ ပနျးသီးအလုံးကွီးကွီးတဈလုံးမှာမှ (၁၁၆) ကယျလိုရီပဲ ပါတာမို့ စိတျခလြကျခစြားနိုငျပါတယျ။
သဈကွားစေ့၊ နကွောစေ့၊ ဗာဒံစစေ့တဲ့ အစအေ့ဆနျတှကေ အာဟာရပွညျ့ဝစှာပါဝငျတဲ့ အဆာပွတှေပေါ။ နှလုံးရောဂါဖွဈနိုငျခွကေို လြှော့ခပြေးပွီး တခြို့သော ကငျဆာရောဂါတှကေိုတောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။ အစအေ့ဆနျတှမှော ကစီဓာတျမြားစှာပါဝငျတာကွောငျ့ လကျတဈဆုပျလောကျစားရုံနဲ့ ကောငျးကောငျးဗိုကျပွညျ့စပေါတယျနျော။ ကယျလိုရီကတော့ တဈအောငျစမှာ (၁၈၀) ကယျလိုရီပါပါတယျ။
Related article >>> ဝိတျကခြငျြလား? ဒီပလနျအတိုငျး ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီအောငျ စားကွညျ့ပါ။
ဒိနျခဉျြတကာ့ ဒိနျခဉျြထဲမှာမှ ဂရိဒိနျခဉျြက ကနျြးမာရေးအတှကျ အသငျ့တျောဆုံးပါ။ ကယျဆီယမျနဲ့ ပိုတကျဆီယမျဓာတျတှေ ကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့အပွငျ ဂရိဒိနျခဉျြမှာ ပရိုတငျးဓာတျတှလေညျး အမြားအပွားပါဝငျပါသေးတယျ။ အဆီမထုတျရသေးတဲ့ ဂရိဒိနျခဉျြ (၁၀၀)ဂရမျမှာမှ (၅၉) ကယျလိုရီပဲပါတာကွောငျ့ ဝိတျခဖြို့အတှကျ အထောကျအကူပွုတာ အမှနျပါပဲ။
ကဲ … ဒါလေးတှကေတော့ ဝိတျလညျးခရြငျး စိတျခလြကျခလြညျး စားလို့ရနိုငျတဲ့ အဆာပွမေုနျ့လေးတှပေါ။ အစားစားရငျး ဝိတျလညျးခကြွတာပေါ့နျော ….
Tags: Fitness, Food, Health, snacks, Weight loss